News - Xalka Goynta Laser Waayo, Automotive Cross Gawaarida Gawaarida Gawaarida
Xalka Goynta Laser Waayo, Automotive Cross Cross Beam Car
Xalka Goynta Laser -ka ee Laydhka Baabuurka ee Kuuriya Video
Mashiinnada goynta tuubada fiber -ka waxay leeyihiin faa'iidooyin gaar ah oo ay ku shaqaynayaan Isgoysyada Baabuurta Isgoyska) sababta oo ah waa qaybo adag oo kaalin wax ku ool ah ka geysta xasilloonida iyo badbaadada baabuur kasta oo adeegsada. Sidaa darteed tayada alaabta la dhammeeyey ayaa ahmiyad weyn leh. Maadaama ay dogob -shaqsiyeed ku jiraan gudaha gaariga, waxay hubiyaan inaysan ku cadaadin qeybta rakaabka haddii ay dhacaan shil dhinac ah. Laydhka Baabuurka ayaa sidoo kale taageera isteerinka, boorsooyinka shilka, iyo muraayada oo dhan. Iyada oo ku xidhan tusaalaha, waxaan ka soo saari karnaa qaybtan muhiimka ah bir ama aluminium, mashiinka goynta leysarka ayaa si fiican u qabta goynta alaabtan.
Shirkadda Gawaarida ee Hyundai waa shirkad matoor caan ka ah Kuuriya, oo ay ka go'an tahay inay noqoto lamaane noloshiisa ku wada baabuurta iyo wixii ka dambeeya. Shirkadda - oo hoggaamisa Kooxda Gawaarida Hyundai, oo ah qaab -dhismeed ganacsi oo hal -abuur leh oo awood u leh inuu wareejiyo kheyraadka min birta dhalaashay ilaa baabuurta la dhammeeyay. Si kor loogu qaado wax -soo -saarkooda wax -soo -saarkooda iyo kor -u -qaadista qalabkooda, shirkaddu waxay go'aansatay inay soo bandhigto mashiinka goynta leybka.
1. Alaabta macmiilku waa biibiile u ah warshadaha baabuurta, waxayna u baahan tahay farsamayn baaxad leh oo otomaatig ah.
2. dhexroor tuuboyinka waa 25a-75A
3. dhererka biibiile dhammeeyayna waa 1.5m
4. Dhererka biibiilaha semifinished waa 8m
5. Ka dib markii goynta laser, weydiista in gacanta robot si toos ah dhufsan karto biibiile dhamaystirtay for dabagal foorarsiga iyo processing jaraa'id;
6. Customer leeyihiin shuruudaha sax goynta laser iyo hufnaanta, iyo xawaaraha ugu sareeya processing ma ka yar yahay 100 R / M,
7. qaybta goynta waa in ay leeyihiin Burr no
8. Goobaabinta la gooyay waa inay u dhowdahay goobada ugu fiican
Xalka Laserka Dahabka ah
Daraasad taxaddar leh ka dib, waxaan samaynay koox cilmi-baaris oo gaar ah oo ay ku jiraan waaxda R&D iyo maareeyahayaga wax-soo-saarka si loo helo xal loogu talagalay shuruudaha goynta dogobka-baabuurka.
Saldhigga P2060A, waxaan u habeynay hal moodal mashiinka goynta laser -ka P2080A si loo buuxiyo shuruudahooda goynta 8 dhuumaha dhererka iyo raridda tooska ah.
Mashiinka Goynta P2080A
Dhamaadka ururinta alaabta, waxay ku dartay hal gacan oo robot ah oo loogu talagalay qabsashada tuubada. Si loo hubiyo saxsanaanta goynta, gabal kasta waa in si adag loogu xiraa gacanta robotka inta aan la goyn.
Goynta ka dib, gacanta robotka ayaa tubbada gaarsiin doonta hababka dambe ee saxaafadda iyo foorarsiga.
Godadka tuubada laaban waa in la gooyaa mashiinka goynta laser -ka ee 3D.
Hel Xallinta Xallinta!
Sidaad arki karto, waxaa jira siyaabo badan oo loo adeegsado MAKIINADDA TUBE TUBE LASER TUBE otomaatiga ah. Oo, hadda waa waqtigii aad heli lahayd xalkaaga la habeeyay oo aad sahamiso suurtagalnimada.